Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan dardargelin ah la qaatay Hoggaanka Maamulka Gobolka Banaadir+Sawirro - Hargeele - Wararka Somali State
Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan dardargelin ah la qaatay Hoggaanka Maamulka Gobolka Banaadir+Sawirro
November 21, 2020 9
Muqdisho.(SONNA):- Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan lagu dardargelinayo howllaha ay bulshada Caasimadda u hayaan la qaatay masuuliyiinta ugu sarreysa Maamulka Gobolka Banaadir.
Rooble ayaa kula dardaarmay masuuliyiinta cusub ee dhowaan loo magacaabay Maamulka Gobolka Banaadir in ay la yimaadaan qorshe cad oo lagu horumarinayo Caasimadda, gaar ahaan dhibaatooyinkii ka dhashay roobabkii xiliyadan ka da’ayay magaalada oo saameyn ballaaran ku yeeshay waddooyinka iyo bilicda Caasimadda.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa faray maamulka gobolka Banaadir in la sameeyo daraasad lagu qiimeynayo khasaarooyinkii ka dhashay roobabka, gaar ahaan burburka jidadka, isagoo ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed in doorkooda ay ka qaataan horumarinta bilicda iyo amniga Caasimadda.
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda oo tilmaamay mudnaanta uu amnigu u leeyahay bulshada ayaa ku booriyey maamulka Gobolka in dib u habeyn lagu sameeyo leyrarka waddooyinka, si aysan uga faa’iideysan mugdiga kooxaha nabad diidka ah.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Cumar Maxamed Maxamuud Filish ayaa uga mahadceliyey Ra’iisul Wasaaraha kulankan muhiimka ah, isagoo sheegay in Maamulkiisu uu ka howlgeli doonno sidii wax looga qaban lahaa bilicda, amniga iyo dib u dhiska Caasimadda.
Xuska maalinta macallinka Soomaaliyeed oo lagu qabtay Muqdisho+Sawirro
She fled Ethiopia’s fighting. Now she warns of ‘catastrophe’ – The Associated Press
WHO oo ka hadashay waxyeelladii ka dhalatay fatahaadaha Dalka
Wasaaradda Caafimaadka Oo Ka War Bixisay Dadaallada Lagu Ballaarinayo Xarumaha Caafimaad Ee Lagula Tacaalayo Bukaannada COVID-19
R/wasaare Kheyre oo ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde)